Phendimetrazine vs Phentermine: मुख्य भिन्नता र समानताहरू - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
भारी खेल समुदाय औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी प्रेस मनोरञ्जन औषधि बनाम मित्र स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण चेकआउट घरपालुवा जनावर कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Phendimetrazine vs Phentermine: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
Phendimetrazine र फेन्टरमाइन दुई औषधी हो जुन मोटाई को लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। उनीहरूले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, वा उच्च कोलेस्ट्रॉलको अधिक वजन भएकालाई पनि उपचार गर्न सक्दछन्। दुबै phendimetrazine र फेन्टरमाइन एक उपयुक्त आहार र व्यायाम आहार संग एक छोटो अवधिको लागि मात्र सिफारिस गरिएको छ। सिम्पाथोमाइमेटिक्सको रूपमा, फेन्डिमेट्राजाइन र फिन्टरमाइनले समान रूपमा काम गर्दछ।
Phendimetrazine (Phendimetrazine के हो?) बन्ट्रिल PDM को सामान्य नाम हो। यो जो १ 17 बर्ष उमेर वा मोटाई को साथ पुरानो को लागी सिफारिस गरीन्छ। यद्यपि यसको कार्यविधि पूर्ण रूपमा स्पष्ट छैन, यसले सीएनएस उत्तेजकको रूपमा भूकलाई दबाउन मद्दत गर्दछ।
वयस्कहरु मा कान को संक्रमण को लागी प्राकृतिक उपचार
Phendimetrazine एक mg 35 मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेट खानाको १ घण्टा पहिले लिईन्छ। एक विस्तारित-रिलीज १० 105 मिलीग्राम मौखिक क्याप्सुल पनि उपलब्ध छ। विस्तारित-रिलीज फारम ब्रेकफास्टको 30० देखि minutes० मिनेट लिन्छ।
फेन्टरमाइन (फेन्टरमाइन भनेको के हो?) एडिपेक्स पी र लोमइराको सामान्य नाम हो। Phendimetrazine जस्तै, यो एक उचित आहार र व्यायाम योजना संग संयोजनमा मोटोपना उपचार गर्न निर्धारित छ। १ only बर्ष भन्दा माथिका उमेर भएकाहरूलाई मात्र लिने सिफारिस गरिन्छ।
फेन्टरमाइन सामान्य .5 37..5 मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा उपलब्ध छ। यो १ 15 मिग्रि, mg० मिलीग्राम, वा .5 37..5 मिलीग्राम मौखिक क्याप्सुलमा पनि आउँदछ। ब्रान्ड नाम, Lomaira, mg मिलीग्राम ट्याब्लेटको रूपमा आउँदछ। Dosing अन्ततः तपाइँको डाक्टरको निर्देशन मा निर्भर गर्दछ। अझै, यो सामान्यतया नास्ता अघि वा पछि लिईन्छ।
Phendimetrazine vs Phentermine साइड साइड साइड तुलना
Phendimetrazine र फेन्टरमाइन समान औषधी हो। मोटोपनाको लागि औषधीको रूपमा, तिनीहरू धेरै समानता र भिन्नताहरू साझा गर्छन्। यी सुविधाहरू तल फेला पार्न सकिन्छ।
Phendimetrazine जेनेरिक नाम हो।
.1२.१4 प्रति tablets ० ट्याब्लेट (mg 35 मिलीग्राम)
Phendimetrazine गर्भावस्था कोटि X मा छ र गर्भवती महिलालाई प्रशासित गर्दा भ्रूण हानी हुन सक्छ। गर्भवती महिलाहरूमा Phendimetrazine सिफारिश गरिदैन।
दुबै फेन्डिमेट्राइन र फिन्टरमाइन मोटाईको लागि निर्धारित औषधि हो। दुबै औषधीहरूको कार्यको सही संयन्त्र अज्ञात छ। जे होस्, तिनीहरू भोक हटाउनमा भूमिका खेल्ने विश्वास गरिन्छ।
कसरी थाहा छ यदि तपाइँको ल्याक्टोज असहिष्णुता
CNS उत्तेजकहरू जस्तो कि एम्फैटामाइन्ससँग मिल्दोजुल्दो, तिनीहरू समान साइड इफेक्ट र ड्रग अन्तर्क्रिया बोक्दछन्। दुबै औषधीहरूले गर्दा बढेको मुटुको दर, रक्तचाप बढेको, र मुटुको धड्कन बढ्न सक्छ। तिनीहरू केहि मानिसहरुमा अनिद्रा पनि निम्त्याउन सक्छ। त्यसकारण, तिनीहरूलाई राती सुत्ने अघि लिनु हुँदैन
Phendimetrazine र फेन्टरमाइन पनि monoamine oxidase अवरोधकर्ताहरूको प्रयोग पछि १ or दिन भित्र वा पछि प्रयोग गर्नु हुँदैन। अन्यथा, त्यहाँ रक्तचाप बढ्ने उच्च जोखिम छ।
जबकि phendimetrazine १ age बर्ष वा माथिका लाई सीमित छ, फिन्टरमाइन १ 16 बर्ष वा माथिका लाई मात्र सीमित छ। Phendimetrazine एक विस्तारित रिलिज फारममा आउँदछ जुन बिभिन्न डोज निर्देशनहरू हुन सक्छन्।
Phendimetrazine र फेन्टरमाइन केवल एक डाक्टरको निर्देशन अनुसार प्रयोग गर्नुपर्दछ। किनभने ती दुबै समान प्रभावहरू र औषधि अन्तर्क्रियाहरू छन्, तपाईको डाक्टरसँग तपाईका विकल्पहरू छलफल गर्न महत्त्वपूर्ण छ। दुबै औषधिहरू पनि गर्भको जोखिमको कारणले गर्भनिरोधक हुन्छन्।
डाक्टर को प्रकार antidepressants लेख्न सक्नुहुन्छ
गैर मधुमेह को लागी सामान्य रक्त शर्करा को स्तर
खाना पछि रक्त शर्करा को लागी सामान्य दायरा
एन्टिबायोटिक मा एक खमीर संक्रमण रोक्न
हामीमा मधुमेह कति सामान्य छ